Talooyin Waayo Socdaalka By Tareen Iyadoo Kids In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Talooyin Waayo Socdaalka By Tareen Iyadoo Kids In Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 06/10/2020)
Nabad iyo raaxo. Laba erey oo aad dhif ku maqashid waalidiinta oo adeegsanaya markay u sheegayaan safarka fasaxa sheekooyinka la kids. Sidaas, waxaan go'aansanay inaan ku siino tilmaamaha ugu muhiimsan ee safarka tareenka adiga iyo carruurta ku nool Yurub.
Waxaa jira wax kaliya oo ku saabsan tareenada in xasiliyaa carruurta si hawada ama safarka baabuur ma samayn. (Waxaan qoray blog ah oo dhan ku saabsan sababta safarka tareenka waa ka wanaagsan dhaqsiyaha iyo Better badan Wadista haddii aad u baahan tahay wax qancin). Isla tagaa sidoo kale ee dadka waaweyn! miisaska Qoyska, marayay Bbc, qolka soc socotid,, goobaha cafe, waqti ay ku chat iyo haleesho iyo, oo farxad u ah farxadaha, xayiraad boorsooyinka. Going by rail waa amaan, raaxo iyo la awoodi karo marka hore lona sii qorsheeyaa. Bar carruurtaada farxadaha ah safarka tareenka laga bilaabo da'da hore oo iyana waxay ahaan doonaan kuweeda noolaa. Dhanka, halkan waa Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe.
Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe: Keena Hawlaha baayacmushtara Kids
Iyadoo iska fuushanaa tareenka waa madadaalo laftiisa gudaha iyo dibada raadinaya hayn karaa kids marti qaaday muddo saacado ah, waxaan sidoo kale soo jeedinaynaa in aad u keeno hawlaha qaar ka mid ah. Ballansan ka hor iyo ka aamin kursiga daaqad oo miis kuu ogolaanaya inaad si ay u faafiyaan buugaagta midabaynta iyo cunto fudud!
Qaar ka mid ah hawlaha tareen talinayaa waxaa ka mid ah:
Kiniiniga: Similar in diyaarad, kiniin ah waxay noqon kartaa hab fiican si ay noqotay markii ugu. Dad badan oo tareenada ee Europe dalab free Wi-Fi, laakiin waxaa mar walba lama hubo, sidaas darteed hubi in aad ka dhigi download movies iyo ciyaaraha guriga. On tareenada ugu, ku dhowaad kursiga kasta uu leeyahay outlet ah si aad korantada lagu eedeeyay, laakiin iyaga ka qaadaan guriga loo eegin – oo keeni headphones!
buugaagta midabaynta: midabaynta buugaag iyo midabyada leh waa jecel yahay a aan loo eegayn waxa da'da.
Ciyaaraha: Haddii aad heli karto kursi miis, waxaa jira bannaan badan u ciyaaro kaararka ama kulan kale ee safarka kasta. Si ka duwan safarka hawada, ma waxaad yeelan doontaa in ay ka wel ku saabsan qas, sidaas darteed soo qaado kulanka qoyskaaga jecel yahay oo taga play. Tani waxay noqon kartaa fursad fiican in si dhab ah ku dhameysan kulan ee monoboli!
Play alaabta lagu ciyaaro: Iyada oo ku xidhan da'da iyo xiisaha ee ilmahaaga, keeno qaar ka mid ah baabuurta dhiibsan ama figurines kale (qabaa Goobo Polly). Wiilkaygiiyow ka dhigaa miiska waa waddo orod ah halka gabadhayda dejiya oo iyada caruusadaha yar si ay u farax geliya on.
Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe: Tixgeli rakaabka kale
Inta badan dadka waxay noqon doontaa mid aad u faham haddii aad leedahay ilmo ooyaya ama socod baradka ah uga caroodeen in ay qaadataa waqti ay ku dejiyaan. ma aha qorshaynta ka hor iyo ogolaanshaha aad u yar hal dhexgalin xiiso sabab la'aanta ah ee qorshaynta laga yaabaa in aan ka heli naxariis badan. Qorshaha madadaalo aan ahayn daakhilaad ama ay u badan tahay in ay keeni dood. Ma doonayno in ay leeyihiin in ay qoraan Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe, in aadan ka tirsaneyn in aad…un yar tiimbanaynay!
Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe: safrida habeen?
Had iyo jeer isku dayaan in ay ku ballansan qol a on a tareen qarsoodiga ah. Qaadashada tareenada habeen baa looga cabsadaa, iyo hurdo waa sida caadiga ah waa weyn ay sabab u tahay ruxid dabiiciga ah ee tareenka. Waxa kale oo ay si xiiso leh u socdaan in ay seexdaan iyo tooso dal kale. compartments Hurdada kala duwan ee dalka, laakiin haddii aad tahay saddex kaliya, mana doonayo in shisheeyaha idinla wadaaga ah ka dibna aad u badan tahay arki doonaa u baahan tahay in miisaaniyadda si ay u iibsadaan sariirta dheeraad ah si aad gaar ah qol jiifka.
Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe: Naftiinna ogolow waqti badan oo marka ay helaan
tareenada Most joojin doonaa oo kaliya laba qof oo ah ugu badnaan daqiiqo oo kasta oo saldhig, sidaas shan daqiiqo ka hor aad timaado waa inaad xirxiraan wax up, kids hurdada + Liverpool, oo gashanno hubka jubbado iyo keeno bacaha off shelf ee dusha. Tani heerka ururka siinaysaa badan oo nabadda ee maskaxda gaar ahaan haddii aad leedahay wax badan oo kids ama a badan oo boorsooyin. Haddii madal waa mashquul, loo hubiyo in bacaha aad iska ugu horeysay ee ka mid ah jidka ay albaabbadu, ka dibna keeni kids hoos dabadeedna si looga hortago cid kasta oo is badiyay.
Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe: Soo qaado Your riixo On Board
Sabab kale oo ay u isticmaalaan Tababar halkii safar hawada waa in aad soo xirxiro kartaa kids aad xaq u galay riixo iyo iyaga xaq u rogo gal tareenka, without the headache of having to dismantle and then reassemble the stroller. You can sometimes even park your stroller in the snack area or other open places on the train (sida meesha la heli karo ilaa iyo inta aan la degan qof oo kursiga curyaamiinta), taas oo waxtar u leh caruurta yar yar kuwaas oo ku seexan doontaa in ay riixo. Tani waa faa'iido weyn ka badan safarka diyaaradda sidii aan helayo helitaanka kid ah inay seexdaan on tareenka inta badan ka sahlan.
Talooyin ku safraya tareen la kids in Europe: imow About 30 Minutes Hore
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee u safraya tareen la kids in Europe ama meel kale oo adduunka ah, waayo, xaalkan in. Ma naftaada siiso waqti si ay u yimaadaan! Si ka duwan safarka hawada, aad uma baahna in ay yimaadaan xarunta tareenka aad u fog ka hor wakhtiga. Marka la kids safraya, waxaan soo jeedinaynaa in uu yimid ku saabsan 30 Daqiiqadihii hore si aad naftaada ku sugan, waxaa laga yaabaa in wax yar ka hor haddii musqusha joogsato iyo nasashada fudud yihiin ajendaha. Sida caadiga ah, nidaamka hoyga ah ma bilaaban doono ilaa 10 daqiiqo ka hor ka tagay ee ugu, laakiin ma doonayo in aad la harjadayaan Oo waxaad heli doontaa naftaada ordaya iyada oo a mashquul station.
Waxa suurto gal ah tip ugu muhiimsan oo dhan. FUDUD! Dad badan oo ka mid ah waddooyinka masaafo dheer muuqan baabuurta cuntada adeeg buuxa leh cunto faro badan kid-friendly – qabaa rooti Faransiis, cheese dubay, doofar la penne. On khadadka gaaban, tareenada leeyihiin baararka cunto fudud bixiya ismaris, bagelka, chips, iyo cunto fudud kale. laga yaabaa in aad rabto in aad ku xirato qaar ka mid ah caruurta aad cunto fudud jecel yahay iyadoo aan loo eegin in kastoo! La dhoofidda dhallaan? Soo qaado cunto ama caanaha ilmaha iyo weydii shaqaalaha adeegga cuntada si ay u kululee kuu. Waxaad samayn kartaa Boos gaariga lagu qadeeyo wax yar ka dib la seexdo. Sida had iyo jeer marka la kids safraya, waa in aad mar walba soo qaataan cunto fudud iyo sharaabka, ay dhacdo in aadan heli karin boos ama bar fudud go'aansato inay xidho oo kaliya marka caruurta aad ku dhawaaqdo in ay gaajoonaya.
Ready in ay geesinimo safar tareen ama carruurta la ah hadda in aad ku hubeysan Talooyin our ee u socdaalaya tareen la kids? Great! Jartaan tikidhka aad la Save A tareenka, kaaftoomi-free!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travelingy-train-kids-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#holidaytips #kidsonatrain #kidstrips #travelwithkids europetravel qoyska longtrainjourneys